प्रशिक्षकको दशैँ योजना कस्तो ? - Khelpati
प्रशिक्षकको दशैँ योजना कस्तो ?
सोमवार, आश्विन २०, २०७६ खेलपाटी संवाददाता
काठमाडौं । प्रशिक्षकहरु सधै खेलाडीको अघि पछि हुन्छन् । उनीहरु आफ्ना खेलाडीको खेल कौशल सिकाउन ब्यस्त हुन्छन् ।
तर, नेपालीहरुको महान पर्व दशैँमा भने प्रशिक्षकहरुलाई खेलाडीको अघि पछि देखिदैन् । प्रशिक्षकहरु पनि महान चाडमा रमाउने गर्छन् ।
नेपाली प्रशिक्षकहरुको दशैं योजना कस्तो छ ?
बिनोद दास (प्रशिक्षक, यू-१९ क्रिकेट टिम )
म दशैं मनाउनको लागि घर कलैया जान्छु । त्यहाँ बुवा, मम्मीसँग ३–४ दिन बस्छु । भेटघाट हुन्छ । बिहान टिकाको दिन टिका लगाएर सोही दिन काठमाडौं फर्कन्छु । र, सासु आमाको हातबाट टिका थाप्न आइपुग्छु ।
हाम्रोतिर प्राय दशैंमा भगवतीको पुजा गरिन्छ । त्यो दिन बलि पनि दिइन्छ । यसरी नै मनाइन्छ दशैं ।
संगीना वैद्य (प्रशिक्षक, तेक्वान्दो )
हाम्रो यसपाली धेरै बिदा छैन, गाउँ (त्रिशुली) जान पाउदिन । तैपनि मेरो परिवार पनि यतै हुनुहुन्छ त्यसैले दशैं यसपाली काठमाडौं (रानीवन, स्वयम्भु) मा नै मनाउछु ।
टिकाको दिन बुवा आमाको हातबाट टिका थाप्ने, आर्शीवाद लिने, मन्दिर जाने र मिलेसम्म एक दिनको लागि गाउँ जाने योजना छ । परिवारसँगको भेटघाट बढी हुन्छ ।
यसपाली चङ्गा उडाउने मन छ । किनेर ४–५ वटा ल्याएर घरको कौसीमा बसेर चङ्गा उडाउछु ।
दिपक महर्जन (प्रशिक्षक, बक्सिङ )
दशैंको दिन बेलुका म १६ देखि १७ वर्षका जुनियर टिम लिएर दुबई जाँदैछु । युएईमा एएसबीसी जुनियर च्याम्पियनसिप हुँदैछ ।
दशैंको दिन टिका लगायो, परिवारसँग समय बिताउने, उनीहरुलाई घुमाउन लैजाने योजना छ । वर्षको एकदिन आउने चाडमा एकदिन रमाइलो गर्नै पर्यो । परिवारसँग धेरै समय बिताउन भने पाउदिन । तैपनि दशैंको दिन एक टाइम ट्रेनिङमा नै व्यस्त हुन्छु ।
पहिला साथीभाईसँग रमाइलो गर्ने, पिङ खेल्ने, चङ्गा उडाउने गर्थ्यौ । र, दशैंको बेलामा केही खेलहरु आयोजना पनि गर्थ्यौ । यसपाली तिनीहरुलाई अलि मिस गर्छु तर बिहान भएपनि रमाइलो त गरिहाल्छु अलि धेरै समय परिवारसँग बिताउन पाइदैन भन्ने मात्र हो ।
जगदीश भट्ट (प्रशिक्षक, राष्ट्रिय महिला भलिबल )
दशैं भन्दा पनि ठूलो चाड १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद जुन आफ्नै देशमा हुँदैछ र अहिले त्यसमा नै फोकस छु । त्यसैले मलाई लाग्छ म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण खेलाडीहरुले दशैंलाई उल्लासपूर्ण रुपमा हेरेको छैन जस्तो लाग्छ । किनभने हाम्रो लक्ष्य भनेको १३ औं साग प्रतियोगिता नै हो ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले ३–४ दिन बिदा दिन्छ । त्यसभित्र आफन्तहरुसँग बसेर दशैँ मनाउने योजना छ ।
साग - पाकिस्तानका तीन खेलाडी डोपिङमा असफल
भारतका हक्की लिजेण्ड बलबीरको निधन
श्रीलंकाका बलर मदुशनकाका निलम्बित